people Nepal » कसैले भारतमा काम गर्ने प्रस्ताव त राखेको छैन ? होस् गर्नुस् यस्तो छ भारतीय नेटवर्किङको ठगी धन्दा कसैले भारतमा काम गर्ने प्रस्ताव त राखेको छैन ? होस् गर्नुस् यस्तो छ भारतीय नेटवर्किङको ठगी धन्दा – people Nepal
कसैले भारतमा काम गर्ने प्रस्ताव त राखेको छैन ? होस् गर्नुस् यस्तो छ भारतीय नेटवर्किङको ठगी धन्दा
Posted on January 16, 2020 by Durga Panta
तपाईंलाई कसैले भारतमा काम गर्ने प्रस्ताव त राखेको छैन ? छ भने सचेत रहनुहोला । छोटो समयमै धेरै पैसा कमाउने आसमा हुनुहुन्छ भने पछुताउनुपर्ला ! भारतमा खुलेका नेटवर्किङ कम्पनीले नेपाली युवायुवतीलाई ठग्दै आएको छ । पछिल्लो समय राम्रो रोजगारी मिलाइदिने आशा देखाएर नेपालबाट युवायुवतीलाई फकाएर भारत लैजाने घटना बढ्दै गएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा एमके माझीले लेखेका छन् ।
उनीहरुले गाउँघरका सोझा र बेरोजगार युवायुवतीलाई कपडा कम्पनीमा लुगा मिलाउने काम दिने भन्दै भारत पु¥याएर अलपत्र पार्ने गरेका छन् । भारतको सारण जिल्ला छपरास्थित माँ लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज नेटवर्क कम्पनीले भ्रामक प्रचार तथा आकर्षक तलबसहित जागिर दिने प्रलोभन देखाउँदै सयौं नेपाली युवायुवतीलाई ठगिरहेको खुलासा भएको छ ।